Ahoana no To Plan A Solo Travel Trip? | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana no To Plan A Solo Travel Trip?
Solo Tsidika amin'ny unadulterated ny tsara indrindra sy ny fanaranam-po-tsitrapo. Tena ny fahafahana ho avy, ka mandehana toy ny ianao, azafady, Mijanona amina toerana iray lava noho ny filana, ary esory ireo tranonkala natao varotra; raha tsy ho nanelingelina. Ny hany ilainao hampandefitra ny hanao dia ny tenanao. Anisan'ny maro ny tsy mitsaha-mitombo Travel fironana manerantany, Solo nivezivezy no maka ny toerana ambony, fa amin'ny fitsangatsanganana irery lehibe tonga andraikitra lehibe. Fantatrareo izay lazainy, misy ireo mpomba sy mpanohitra ny toe-javatra rehetra. Ny fanirianao ho any izany irery dia midika hoe tsy maintsy ho handroso-fomba fisainany sy vonona. Ny Buck mijanona miaraka aminao. Raha mandeha zavatra kely miendrika poara-, dia mila manana toky sy savvy ny manatsara izany. Ireto misy torohevitra tsara indrindra momba ny fomba hanomanana fitsangatsanganana an-tany irery.
Train Transport no Eco-Friendly sy azo antoka indrindra Way To Travel. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
Ny iray amin'ireo fomba malaza indrindra ny fitaterana ho an'ny mpandeha irery dia ny mandeha lamasinina. Nandeha lamasinina Manokatra ny maro ny toerana fa afaka manenjika an herinandro vitsivitsy. Misy ihany koa ny singa ara-tsosialy, Tena tsara izany fomba mba hifandray amin'ny mpiara-Mpisantatra ao anatin'ny tontolo azo antoka. Solo mandeha lamasinina ihany koa ny fomba tena lehibe ho afaka hahita toerana sy ny endriky ny rehefa handeha hamaky eo aminy. Misy ihany koa ny tsaho fa ny fiaran-dalamby no tonga lafatra mpitarika ny olona manontany momba ny fiaran-dalamby sary, hanandrana azy noho ny tonga lafatra manaraka Instagram tantara.
Mifidy A Destination & famandrihana Accommodation
Rehefa mifidy ny toerana ho an'ny irery mandeha – maso eny-vanim-potoana, izay mety hanampy haninjitra ny teti-bola kely kokoa. Ny diany rehetra dia anareo, fa toy izany koa ny vidiny. Ny fananana izany ao an-tsaina, jereo ny toetrandro! Misy toerana nandritra ny vanim-potoana misy eny-nahatsiravina fotsiny ary mety ho hevitra tsara ny ao an-tsaina foana zava-nitranga lehibe na ny fety izay afaka mandefa vidin'ny Mihabetsaka. Tsy misy tsy fahampiana ny zavatra ilaina, na aiza na aiza manapa-kevitra ny Travel, trano fandraisam-bahiny, B&B ny, sy ny nampitombo Airbnb. Mifidiana ny izay ny tsara ho anao sy ny teti-bola.
Solo Travel Trip: Mikasa ny faritany haleha izy
-Tsitrapo dia iray amin'ireo tsara indrindra Travel perks ny irery, fa, atomboka amin'ny, miezaka sy manana antsipirihany faritany haleha izy. Tena tena tsara hanombohana. Fantaro manan-danja Zava-nisongadina Tamin'ny toerana efa nofidiko sy hanorina fizotry. Ny hatsaran-tarehy ny manana an-tsipiriany fa faritany haleha izy dia afaka mitari-dalana anao, raha miaraka amin'izay koa, mamela anao hiova rehefa mandeha eny.
Safety aloha Tsy mbola apter. Raha toa ianao mandeha any amin'ny toerana vaovao sy unchartered ho anao, hahatsiaro ny heloka bevava ao an-toerana sy ny toerana mafana hanao ny fikarohana! Rehefa avy ianao sy ny, foana ny zava-tsarobidy avy tany lemaka fahitana ka tsy miezaka handeha manodidina ny mijery eo amin'ny findainao. Mitondra ny trano fandraisam-bahiny anarana sy adiresy aminao, raha toa ka. Andramo ka familiarize ny tenanao sasany eo an-toerana sy ny isan'ny vonjy taitra raha mbola ianao fiarovana fikarohana fanazavana manokana noho ny toerana halehany, manao kely fikarohana momba fahalalam-pomba ara-kolontsaina ihany koa. Ny iray amin'ireo tsara indrindra no mizara fepetra fiarovana ny faritany haleha izy amin'ny namana na ny fianakaviana iray mpikambana. Aoka ny olona hahita izay itoeranareo ary inona ny drafitra dia. Fanavaozam-baovao azy ireo fanovana mety ho teny an-dalana.
Solo Travel Trip: Mitadiava namana teny an-dalana
Raha irery mandeha lehibe, dia afaka handeha ho andro tsy miteny ny olona iray. Ny fiadanana dia mety ho iray amin'ireo antony mandeha irery ianao, fa afaka maka ny fiantraikany amin'ny farany. Soa ihany, rehefa eo ny hetsika, fa tena mora ny hihaona olona vaovao, ary hamely ny vitsivitsy resaka. matoky. Ataovy ny sofinareo misokatra ho lantom-peony ny mahazatra ihany, ary mahatsiaro fa nizara zavatra dia tonga lafatra ranomandry-mpandika mba hifandray amin'ny namana niaraka nanao.
Rehefa mandeha irery, mila ho azo antoka dia afaka mitondra ny zava-drehetra eo amin'ny manokana. Entina-on, valizy, na kitapom-batsy dia tokony ho valizy feno indrindra na dia herinandro na telo ianao no mandeha. Entana ny toerana itodiana, nahandro ho ny toetrandro, izay tokony hanamaivana ny enta-mavesatrao. Te ho gaga ianao amin'ny fomba tsara izany ny entana ihany no mahatsapa ny tena ilaina ka hamela ny manangona aoriana. Ny fakan-tsary dia foana fa ilaina, Solo Travel sy sary akaiky.
Solo Travel Trip: Dinner Voalohany
Raha toa ianao ka sahy sampana ho irery Tsidika, herim-po ianao ampy sakafo irery. Any amin'ny tany maro, sakafo maraina sy ny sakafo antoandro mirona ho bebe kokoa eo amin'ny lafiny fitenenana mahazatra izany raha matahotra ny latabatra iray Ohatra, manomboka amin'ny sakafo ireo fotoana. Makà horonan-taratasy na gazety eo aminareo raha te ho irery ary raha tena tsy ny zavatra, fijery ho fihaonana eo an-toerana vondrona. Azonao atao ny mifandray amin'ny olona amin'ny foodie revel fivoahana sy raha te-tena te-tsy ny vahoaka, manantena zavatra ilaina izay manome ny kitchenette sy mahandro ny ny ny tafio-drivotra.
Andramo tonga tany The Day
Raha ianao mihevitra ny faritany haleha izy, miezaka ny drafitra ho tonga mandritra ny ora maro. Izany dia tena sarotra ny mitady ny lalanao amin'ny alalan'ny iray tsy nahazatra tanàna ao amin'ny maizina, ary vao mainka izany rehefa manao izany irery. Planning dia ho be pitsiny toerana lehibe eo Solo Travel asa fitoriana, atomboka amin'ny, ary afaka hiova rehefa mandeha rehefa mifindra eny Fa ireo kosa dia kely manao be tsipiriany hafa.
Ianao manao ny safidy tsara mba hanao ny sasany mandeha amin'ny anao manokana ary manana Solo Trip. Ho lavitra kokoa sy mivelatra ny fahaiza izay mitranga manodidina anao. Matoky hatrany ny esory tsara ny taovany sy ny Fahendrena, rehefa mandeha ny fampiasana Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ahoana no To Plan A Solo Travel Trip?” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolo-travel-trip%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)